« 3 IN ONE EVENT » : Mandray CV avy hatrany - Journal Madagascar
in ACTUALITE, Economie, Education, SOCIAL
Trano heva 26 mandravaka ny hetsika natokana ho an’ny fampiofanana sy ny asa « 3 in one Event ». Orinasa 16 toy ny « agence de recrutement », « centre d’appel » ary fianarana ambaratonga ambony avy eto an-toerana sy avy any ivelany no mandray anjara amin’ity hetsika karakarain’ny As’Sidus Madagascar ity. « Ho an’ny centre d’appel Web help » izao dia manana tolotr’asa mihoatra ny 200 », hoy ny tomponandraikitry ny serasera avy ao amin’ny As’Sidus, Mamisoa Ranarivelo.
Nanomboka omaly 16 aogositra 2018 ny hetsika ary hifarana androany 17 aogositra 2018. Eny amin’ny Carlton Anosy ny toerana. Tsy misy ny vidim-pidirana. Mampahafantatra ny tolotr’asa misy ao aminy sy mandray curriculum vitae (CV) avy hatrany ireo orinasa mandray anjara amin’ny « 3 in one event ». Ankoatra ny tolotr’asa dia manoro lalàna ireo mpianatra manana diplaoma bakalorea no miakatra ihany koa ireo oniversite na ivon-toeram-pampianarana manana trano heva eny amin’ny Carlton Anosy.